Basic Political Science Part (1) ~ လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်
Second Edition OF Microsoft Office Word 2003
First Edition of Microsoft Office Word 2003
ဂျပန်ရောက် မြန်မာလူမျိုးများ၏ ၈ လေးလုံး လှုပ်ရှားမှု ဓာတ်ပုံများ
ဂျပန်ရောက် မြန်မာလူမျိုးများ၏ အာဇာနည်နေ့ လှုပ်ရှားမှု ဓာတ်ပုံများ
Basic Political Science Part (1)
Thursday, July 16, 2009 0000 8 comments
How to InterpretaPolitical Science?
Item Who, What, When
Researcher Mg Si Thu
Date September 1st, 2007
Event Discussion – "Strong Leadership for Burma's Future"
အနာဂတ်နိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံရေးစနစ်၊ ပညာရေးစနစ်၊ စွမ်းအင်၊ စီးပွါးရေးစနစ်၊ လူမှုရေးစနစ်၊
Basic Political Science
The International Studies
အခြေခံနိုင်ငံရေးသိပ္ပံဆိုသည်မှာ နိုင်ငံရေးများမည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ မည်သို့ဖွဲ့စည်းထားပုံ၊ နိုင်ငံသားတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားနှင့် အခွင့်အရေးများ၊ ၄င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးဟူသော မဏ္ဍိုင်ကြီးသုံးရပ်နှင့် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးမူဝါဒများအပေါ် ကျယ်ပြန့်စွာ လေ့လာသော ပညာရပ်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးပညာရပ်ဟုဆိုသော်လည်း ဖေါ်ပြမည့်အကြောင်းအရာများသည် အရင်းရှင်ဝါဒ၊ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ၊ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ စသည်ဖြင့် ၀ါဒရေးရာဆိုင်ရာများ မဟုတ်ပေ။
မည်သည့်ဝါဒ၊ မည်သည့်သဘောတရား၊ မည်သည့်စနစ်များကို လက်ခံကျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံဖြစ်စေ နိုင်ငံတိုင်း၌ ရှိရမည့် ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးဟူသော သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ့အစိုးရအပါအ၀င် တိကျစွာလိုက်နာရန်၊ ပြုလုပ်ရန်နှင့် အဓိကတာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်သော ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးသုံးခုအား ဗဟိုပြု၍ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားဆိုင်ရာများကို လေ့လာသော အကြောင်းအရာများသာဖြစ်သည်။
ဤစာပေများသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတို့အားလည်းကောင်း နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်များ၏ မူလအစောပိုင်းကာလ၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ မူလအစောပိုင်းကာလများမှ ကမ္ဘာကျော်ပညာရှင်များ၏ အတွေးအခေါ် အယူအဆများဖြင့် ပြန်လည်ဆန်းစစ် သုတေသနပြုခြင်းနှင့် အနာဂတ်အလားအလာများအတွက် စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ရန် အခြေခံတစ်ခုအဖြစ်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။
1) Polititic (နိုင်ငံရေး)
2) Political Theories (နိုင်ငံရေး သဘောတရားများ)
3) International Political Systems (နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးစနစ်များ)
4) Geography Politic and Comparative Politics (ပထ၀ီနိုင်ငံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးစနစ်များ)
5) International Relation (နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး)
6) International Organizations (နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ)
7) Public Policies (ပြည်သူ့မူဝါဒ)
8) Defense and Security Policies (ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ)
နိုင်ငံရေး (Political )
နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ လူသားတို့သည် မိမိတို့နေထိုင်သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်း၌လည်းကောင်း မိမိတို့နေထိုင်ရာ ဤကမ္ဘာမြေကြီး အတွင်း၌သော်လည်းကောင်း နေ့တဓူဝတွေ့ကြုံ ဖြတ်သန်းနေရသော စားဝတ်နေရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး အစရှိသော အရေးအရာကိစ္စများအတွက် မိမိတို့ဘ၀တလျှောက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရသော ဖြစ်စဉ်သာဖြစ်၏။
ဤလောက၌ လူရယ်လို့ဖြစ်လာသောအခါ နေမှု၊ ထိုင်မှု၊ စားသောက်မှုဆိုသော ကိစ္စတို့သည် မလွဲမသွေ လှုပ်ရှား ရုန်းကန်ကြရမှာ ဖြစ်ပါ၏။ ဤသည်မှာ သဘာဝပင်ဖြစ်ပါ၏။
လူသားတွေသည် မွေးဖွါးကြီးပြင်းလာပြီးနောက် သေဆုံးသောအချိန်ထိ မိမိတို့ဘ၀ကို ရုန်းကန်လှုပ်ရှားသွားရတာချည်းပင် ဖြစ်ပါ၏။ သက်သက်သာသာ ရုန်းကန်ရခြင်းနှင့် ဆင်းရဲပင်ပမ်းစွာ ရုန်းကန်ရခြင်း၌သာ ကွာခြားသော်ငြားလည်း အားလုံးသော လူသားတွေသည် အသက်ရှင်နေထိုင်ရစဉ်ကာလ တလျှောက်လုံး၌ ဘ၀ကိုအမျိုးမျိုးသော အခက်အခဲများအကြား ရုန်းကန်ဖြတ်သန်းကြရမည်သာ ဖြစ်ပါ၏။
ဤသည်ကိုပင် လူတယောက်၏ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ဟုဆိုပါ၏။ ဤကမ္ဘာလောက၌ လူတဦးတယောက်တည်းသာ အသက်ရှင် ရုန်းကန်ရသည်မဟုတ်ပေ။ ဤကမ္ဘာမြေ၌ လူသားသန်းပေါင်းများစွာတို့သည် တပြိုင်နက်တည်း ဘ၀ကိုရုန်းကန် ဖြတ်သန်းနေရသောကြောင့် လူသားသန်းပေါင်းများစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေသော နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကြီးသည် မိမိတို့၏ မိသားစု၊ မိမိတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်၊ မိမိတို့၏ဒေသ၊ မိမိတို့၏နိုင်ငံ ထိုမှတဆင့် ကမ္ဘာနှင့် အ၀န်းဆီသို့ ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ပေါင်းကူးဆက်စပ်မျှက် ဤကမ္ဘာကြီးနှင့် ဤလူသားတွေ တည်ရှိနေသ၍ တနည်းအားဖြင့် လူတို့၏စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွါးရေး စသည့် လူမှုစီးပွားရေးအရာကိစ္စများ တည်ရှိနေသ၍ ဤနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကြီးသည် အစဉ်အမြဲဖြစ်ပေါ်နေမည်သာ ဖြစ်ပါ၏။
မြန်မာ့လောက၌ နိုင်ငံရေးဟုဆိုလိုက်သည်နှင့် အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေး၊ ပါတီအဖွဲ့အစည်း၊ အစိုးရဆန့်ကျင်ခြင်း၊ အစိုးရထောက်ခံခြင်း၊ တော်လှန်ခြင်း၊ စစ်မက်ဖြစ်ပွားခြင်း စသဖြင့် လူအများစုသည် လျှင်မြန်စွာဖြင့် အလွယ်တကူ နားလည်တတ်ကြပါ၏။ အမှန်အားဖြင့် "နိုင်ငံရေး" ဟူသော အနက်အဓိပ္ပါယ်အား သည်ထက်ပို၍ သဘောပေါက် နားလည်ထားသင့်ပါ၏။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မိမိဘ၀နှင့် တိုက်ရိုက် ပတ်သက်နေသောကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါ၏။
ဥပမာအားဖြင့် အိမ်ထောင်စုတစုအတွင်းတွင် စားဝတ်နေရေး၊ မိသားစုအတွင်း ကျန်းမာရေး စသည်လိုအပ်ချက်များအား နေ့တဓူဝ တွေ့ကြုံဖြည့်စည်းနေရမည်သာ ဖြစ်၏။ ဤသို့ ဖြည့်စွမ်း ပေးနိုင်ရန်အတွက် လုပ်အား၊ ငွေကြေး၊ ၀န်ဆောင်မှုတွေသည် ထပ်မံလိုအပ်လာမည် ဖြစ်၏။
ထိုလိုအပ်ချက်အားလုံးသည် မိမိတို့မိသားစုအ၀န်းအ၀ိုင်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်နယ်ပယ် အပြင်ဘက်သို့ ရောက်ရှိသွားးမည်ဖြစ်ပြီး အခြားအခြားသော မိသားစုတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်နယ်ပယ်နှင့် ပေါင်းကူး ဆက်စပ်သွားမည် ဖြစ်ပါ၏။
ထိုအခါ စား၊ ၀တ်၊ နေရေး၊ ကျန်းမားရေး၊ ငွေကြေး၊ လုပ်အားနှင့် ၀န်ဆောင်မှု စသည့်တို့၏ လိုအပ်ချက်တွေသည် ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ကြီးမားလာမည်သာ ဖြစ်၏။ ထိုမှတဆင့် ဒေသတစ်ခု၊ ခရိုင်တစ်ခု၊ ပြည်နယ်တစ်ခု၊ နိုင်ငံတစ်ခု စသဖြင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သွားပြီး နောက်ဆုံး ကမ္ဘာနှင့်အ၀န်းဆီသို့ ငြိမ်သက်နေသော ကန်ရေပြင်ထဲသို့ ခဲလုံးတစ်လုံး ကျသွားသည့်အခါ၌ ဖြစ်ပေါ်လာသော လှိုင်းဂယက်ပမာ အရပ်မျက်နှာအဘက်ဘက်ဆီသို့ ပျံနှံရိုက်ခတ်သွားပြီး အပြန်အလှန် ပေါင်းကူး ဆက်စပ်သွားမည်ဖြစ်၏။
တနည်းအားဖြင့် နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ဆိုသည်မှာ လူတစ်ယောက်၊ မိသားစုတစ်စုဆီမှ လူသန်းပေါင်းများစွာ၊ အိမ်ထောင်စုသန်းပေါင်းများစွာတို့၏ စားဝတ်နေမှု ကိစ္စရပ်များ၊ ထိုမှတဆင့် ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြဿနာများအား အနည်းစုမှ အများစုအထိ ဆက်စပ်ဖြေရှင်းရသော ဖြစ်စဉ်သာဖြစ်၏၊ တနည်းအားဖြင့် ပြဿနာများအား ဖြေရှင်းပေးသော နည်းစနစ်များအား ဆွေးနွေးခြင်း၊ တိုင်ပင်ခြင်း၊ ငြင်းခုန်ခြင်း၊ ပြိုကွဲခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ စသည့်အကျိုးဆက်များအား မိမိတို့ပြုလုပ်လိုသော အကြောင်းတရားအပေါ်မီ၍ အကျိုးဆက်ဟူသည် ဖြစ်ပေါ်စေမည်သာ ဖြစ်ပါ၏။
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေးဟူသော စကားလုံးနှင့်အတူ ဤကမ္ဘာမြေ၌ ငြိမ်းချမ်းရေးဟူသော စကားရပ်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၂၅၇၀) ခန့်ကတည်းက ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါ၏။ ထိုမှစ၍ လူတို့၏စားဝတ်နေရေး ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး စသည့်ပြဿနာရပ်များအား ဖြေရှင်းရာ၌ ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းရေးဟူသော ဖြစ်စဉ်သည် ပြဿနာရပ်များအပေါ် ချဉ်းကပ်ဖြေရှင်းရာ၌ ယနေ့ထက်တိုင် ပထမနေရာမှစ၍ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်သော အစဉ်အလာတရပ် ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါ၏။
နိုင်ငံရေးဟူသည် မိမိတို့၏ အရေးကိစ္စသာ ဖြစ်၏၊ နိုင်ငံရေးအား စဉ်းစားရာ၌ မိမိတို့၏ဖြစ်စဉ်နှင့် တိုက်ရိုက် ချဉ်းကပ်စဉ်းစားရန် လိုပါ၏။ ဝေဖန်ဆန်းစစ်ရန်လိုပါ၏။ တွေးခေါ်မြော်မြင်၍ အဖြေရှာရန်လို၏။ သို့မဟုတ်ပါက မိမိသည် လူသားတယောက်၌ရှိသော လောကတာဝန်ဝတ္တရားအပေါ် တာဝန်ကျေပြွန်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
"လူ"ဟူသည် လူသားတာဝန် ကျေပြွန်ရန်လိုအပ်ပါ၏၊ ဤလောက၌ မိမိ၏ကာယအား၊ ဉာဏအားတွေဖြင့် ဤကမ္ဘာလောကအကျိုး၊ ဤလူသားတွေအကျိုးစီးပွါးကို ဆောင်ရွက်သည့်နေရာ၌ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်သင့်ပေ၏။ ဤသို့ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်ရာ၌လည်း မိမိအကျိုးစီးပွား တစ်ခုတည်းကိုကြည့်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ မိမိအကျိုးစီးပွါးထက် အများအကျိုးစီးပွားကို ရှေ့ရှုသော ကာယအား ဉာဏအားမျိုးသာ ဖြစ်သင့်ပါ၏။ သို့မှသာ မိမိ၊ မိမိတို့၏ မိသားစု၊ မိမိတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်၊ မိမိတို့၏ ဒေသ၊ မိမိတို့၏ နိုင်ငံ၊ မိမိတို့၏ ဤကမ္ဘာ၌ ငြိမ်းချမ်းသာယာ ၀ပြောသော လူ့ဘောင်ကြီး ဖြစ်ပေါ်နေမည်ဖြစ်ပါ၏။
ဤသို့အားဖြင့် နိုင်ငံရေးဟူသည် မိမိတို့ရှင်သန်နေထိုင်ရာ ဤကမ္ဘာကြီး၌ လူသားအားလုံးတို့သည် မိမိတို့အသက်ရှင်နေသ၍ ကာလပတ်လုံး နေ့တဓူဝရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော စားဝတ်နေရေးတည်းဟူသော ဒုက္ခသစ္စာ (အမြဲတမ်းမှန်ကန်စွာ မဖေါက်မပြန်ဖြစ်ပေါ်နေသော ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရား) ပင်ဖြစ်ပါ၏။
Posted in: နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ
အစီအစဉ်ကောင်းလေးပါ။ သိပ်အကျိုးရှိပါတယ်။ နောင်အရှည်သဖြင့် အလုပ်ဆက်လုပ်နိုင်ပါစေဗျာ။
June 14, 2011 at 10:26 PM
တချုိ့ပို့စ်လေးတွေကို ကူးယူခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။ ကျနော့်ဘလောက်လေးမှာသုံးချင်လို့ပါ။ ခုမှ တွေ့ရတာပါ ဒိဘလော့လေးကို။
June 14, 2011 at 10:29 PM
Please continue writing about Political Science as myanmar students do not haveachance to learn it in university even though it is one of the most important subjects for everyone.
October 22, 2011 at 10:24 PM
October 22, 2011 at 10:32 PM
March 20, 2014 at 8:44 PM
aron jajar said...
pdf လေးတှလေုပျပေးရငျ ပိုကောငျးပါမယျ
November 6, 2020 at 12:09 PM
How to InterpretaPolitical Science? Item Who, What, When Researcher Mg Si Thu Date September 1st, 2007 Event Discussion – "Strong Lea...
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသသည် သမိုင်းကြောင်းအရ အလွန်ရှည်လျားရှုပ်ထွေးသော ဒေသတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပေသည်။ ပထမဦးစွာ ဘီစီ ၃၅၀၀ ခန့်တွင်မက်ဆိုပိုတေးနီးယန်းဒေသအဖြ...
Call of Duty (တိုက်ပွဲခေါ်သံ)
HRDP CIS Research Paper
The East Asia Conflict Zone
The East Asia Conflict Zone အရှေ့အာရှဒေသ ပဋိပက္ခရပ်ဝန်း Spratley Islands Conflict အရှေ့မြောက်အာရှဒေသ၌ စစ်ရေးတင်မာမှုများ ဖြစ်ပွါးနေစဉ် အတော...
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးသည် ဆိုသော်လည်း
အကျဉ်းချခံနေရသူများအား “လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်” ပေးသည် ဆိုသော နိုင်ငံတော် သမတ ဦးသိန်းစိန်၏ ဆောင်ရွက်ချက်မှာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းခွင့် အစစ်အမှန် ...
ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ တောင့်ခံပါ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လှည့်လည်ဟောပြောယင်း ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်း တောင်တွင်းကြီးမြို့  ရွှေအင်းတောင်ဘုရားတွင် ပြောကြ...
နိပွန်နိုင်ငံ အမွိုင်မြို့ ၌ ၂ လကြာမျှ စောင့်ဆိုင်းပြီးနောက် နီပွန် ဗိုလ်မှူးကလေးတစ်ဦး ကျွန်ုပ်တို့အား အခေါ်လွတ်ကာ ဗမာနိုင်ငံရှိ ကွန်ုပ်တို...
Political Science Part (51)
အီတလီနိုင်ငံ နိုင်ငံအမျိုးအစား အစိုးရတစ်ဖွဲ့တည်းသာရှိသော ယူနီတရီနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး ၁၉၄၆ခုန...
၁၈၁။ နယူးဇီလန် (New Zeland) နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း အေးဒီ ၈၀၀ ခန့်တွင် ပိုလီနေရှင်း မာအိုရီတို့ နယူးဇီလန်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ ၁၈၄၀ တွင်...
ဗိုလ်ချုပ်၏ ဗိုလ်ချုပ်- ၁
ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးအရေးတော်ပုံ ၁၉၃၈ အောက်တိုဘာလတွင် တို့ဗမာ အစည်းအရုံးသို့ သခင်အဖြစ် စာရင်းသွင်းခဲ့၏။ ဥပဒေတန်း၌ စခန်းကုန် သင်ရန်ကိစ္စကို၎င်း၊ ကွ...
နိုင်ငံတော်သစ် လေ့လာရေးစာစဉ် (၁)
ငါးရာ့ငါးဆယ် နိပါတ်တော် လက်ရွေးစဉ်ဝထ္ထုတော်များ အပိုင်း(၁ မှ ၉ ထိ)
ဓမ္မပဒ လက်ရွေးစင် ဝတ္ထုတော်များ (၉)
ဓမ္မပဒ လက်ရွေးစင် ဝတ္ထုတော်များ (၈)
ဓမ္မပဒ လက်ရွေးစင် ဝတ္ထုတော်များ (၇)
ဓမ္မပဒ လက်ရွေးစင် ဝတ္ထုတော်များ (၆)
ဓမ္မပဒ လက်ရွေးစင် ဝတ္ထုတော်များ (၅)
ဓမ္မပဒ လက်ရွေးစင် ဝတ္ထုတော်များ (၄)
ဓမ္မပဒ လက်ရွေးစင် ဝတ္ထုတော်များ (၃)
ဓမ္မပဒ လက်ရွေးစင် ဝတ္ထုတော်များ (၂)
ဓမ္မပဒ လက်ရွေးစင် ဝတ္ထုတော်များ (၁)
ကျီးသဲလေးထပ် ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ စွယ်စုံကျော်ထင်ကျမ်း
Copyright © 2011 လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ် | Powered by Blogger
ယခုသင်ဖွင့်ကြည့်နေသော ဘလော့ဂ်အား Mozilla Firefox ဖြင့်ဖွင့်ကြည့်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။